Ny alatsinainy 6 novambra ho avy izao izy ireo no hanomboka hiverina an-tsekoly hatramin’ny 22 desambra, fotoana hidirana ao anatin’ny fialan-tsasatry ny noely sy ny taom-baovao. Ny 4 janoary taona 2018 indray no hiverina an-tsekoly, hitsahatra ny 20 janoary, fotoana hanamarihana ny fetin’ny sekoly. Tsy lava toy ny teo aloha ny fanamarihana ny fetin’ny sekoly fa hifarana ny 3 febroary ary ny volana martsa indray vao hisy fijanonana kely ho fanamarihana ny tsingerin-taona nisian’ny tolom-panafahana tamin’ny 29 martsa taona 1947. Hanohy ny fianarany indray ny mpianatra ny 3 aprily hatramin’ny 22 jona. Ny 25 sy ny 26 jona ihany ny fialan-tsasatra ho an’ny fetin’ny fahaleovantena. Tsy hifarana ny taom-pianarana raha tsy ny 3 aogositra taona 2018. Ny 4 aogositra kosa no hanomboka amim-pomba ofisialy ny vakansy lehibe. Tsiahivina fa ny 31 jolay taona 2018 no hanatontosana ny fanadinana CEPE, ny 20 ka hatramin’ny 23 aogositra ny fanadinana BEPC ary herinandro aorian’izay ny fanadinana Bakalôrea. Ireo fari-piadidiam-pampianarana nahitana ny aretina pesta ihany moa no voakasik’ity tetiandrom-pampianarana vaovao ity.